Costa Rica Ntugharị Njem & Ntughari Otu Di na Nwunye
Obodo nta, Costa Rica na-agabiga na ịma mma na ịma mma. Akanal Volcano bụ otu n'ime ihe kasị dị egwu na mba ọdịda anyanwụ, Costa Rica na-ejekwa ozi dị ka otu n'ime ebe ndị na-achọ nlegharị anya na ụwa. Gaa na Necoya Peninsula, ebe mmiri iyi ya na oké ọhịa ga-ekpochapụ gị na mma, ma ọ bụ Guanacaste, "Gold Coast" Costa Rica.
Ebe nkiri Gbasawanye
Ebe nchekwa Biological Reserve nke Monteverde Cloud
Ọkọlọtọ National Park Manuel Antonio
Ozi di oke mkpa Gbasawanye
Ego: Costa Rican Colon (CRC). CNY bụ 570 maka 1 USD ugbu a.
Ike Ike: Na Costa Rica, ntọala ike dị na ụdị A na B. Ụdị volta ọkọlọtọ bụ 120 V na usoro nhazi bụ 60 Hz.
Mpụ na Nchedo: Ọ bụ ezie na ime ihe ike na-emekarị n'etiti òtù ndị metụtara ọgwụ ọjọọ, ndị njem nleta na-anọ n'akụkụ ndị mara mma ekwesịghị inwe nchegbu mgbe Costa Rica. Na San José, ọ bụ ihe amamihe dị oke egwu na-anọchi anya site na onwe gị, ma ọ bụghị na-etinye ihe ize ndụ nke ịnakọta-pocketed - nke a na-ahụkarị n'obodo.